असफल स्वस्तिमा ! - Movies Club Nepal
बागी ३’ को डर !
‘हाथी मेरे साथी’ टिजर रिलिज
लगनगाँठो कस्दै आँचल
Home	News	असफल स्वस्तिमा !
by Movie Club Nepal २६ मंसिर २०७६, बिहीबार १०:४४
यस वर्ष ब्रान्ड फिल्मका सिरिज र टिमका फिल्मले मात्र नाफाको व्यापार गर्न सफल भएका छन् । नयाँ नाममा बनेका फिल्मले हलमा दर्शकलाई आकर्षित गर्न नसकेको अवस्था छैन । बैशाखदेखि मंसिर तेस्रो सातासम्म ५० बढी फिल्म रिलिज भए पनि चार फिल्मले मात्र लगानी उठाए । बाँकी फिल्मले भित्तामा टाँस्नका लागि छापिएको पोस्टरको पैसा समेत उठाउन सकेनन् ।
यस वर्ष बक्सअफिसमा डिजास्टर साबित भएका फिल्मको सूचीमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको पनि दुई फिल्म परेका छन् । गत वर्ष ‘बुलबुल’ बाट सार्क फिल्म फेस्टिबलमा जुरीतर्फ उत्कृष्ट अभिनेत्री र सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’ बाट सम्मानित भएकी उनको यस वर्षको साउन र कात्तिकमा दुई फिल्म ‘हजार जुनीसम्म’ र ‘घामड शेरे’ प्रदर्शनमा आएका थिए ।
तर, यी दुबै फिल्मले न दर्शकलाई सन्तुष्ट बनाउन सके न त नाफाको व्यापार गर्न नै । यी दुई फिल्ममा उनको अभिनय पनि रुचाइएन । यही स्तरको फिल्म, चरित्र र अभिनयले राष्ट्रिय अवार्ड विजेता अभिनेत्रीको साख नजोगिने समीक्षकको टिप्पणी छ । ‘बुलबुल’ पछि उनले आफूमा चुनौती र जिम्मेवारी थपिएको रटान लगाइरहे पनि त्यो ब्यबहारमा भने पिटिक्कै देखिएको छैन ।
२ महिनाको अन्तरमा २ सुपर फ्लप फिल्म दिएकी उनी अब यस वर्षको अन्तिममा फिल्म ‘चपली हाइट ३’ लिएर आउँदैछिन् । यो फिल्म चैत २८ गते फिल्म ‘प्रेमगीत ३’ सँग भिड्दैछ । यो फिल्म उनका लागि समीक्षात्मक र व्यापारिक दुबै रुपमा सफल हुन आवश्यक छ । यदी यसो हुन नसके उनले यस वर्ष फ्लप फिल्ममा ह्याट्रिक गर्नेछिन् । भने, आलोचनाको पनि शिकार हुनुपर्नेछ ।
पहिलो पटक सस्पेन्स-थ्रिलर फिल्ममा काम गरेकी उनी ‘चपली हाइट ३’ मा आफ्नो भूमिका विल्कुलै फरक नभए पनि दर्शकलाई मनपर्नेमा विश्वस्त छिन् । निकेश खड्काको निर्देशन रहेको फिल्ममा प्रायः नयाँ अनुहारको अभिनय भएका कारण उनी एक्लैको काँधमा फिल्म बोकेर चलाउनु पर्ने चुनौती छ । यो फिल्मले स्वस्तिमालाई एकै वर्ष फ्लप फिल्ममा ह्याट्रिक गर्नबाट बचाउला त ?
१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १८:१९
१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १८:१६
१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १८:१३